"Ndinofunga kuti ndakauraya mumwe munhu"
Lana Clarkson Akawanikwa Akafira muSpector's Mansion
Musi waFebruary 3, 2003, mapurisa akaenda kuSpector's Los Angeles mansion mushure mekutambira dambudziko rekukurumidzira 9-1-1 kudanwa. Sezvakataurwa mumapurisa mapurisa, mapurisa akawana mutumbi wemusikana wemakore makumi mana anonzi Lana Clarkson akagara akagara pachigaro mumoto. Akanga apfurwa mumuromo uye bhuruu yebhuruu .38 Mukwidzi weColt ane mbiya yemasendimita maviri akawanikwa pasi pasi pedyo nemuviri wake.
Clarkson akanga ari mutambi wenhau uyewo ari kushanda semubatanidzwa muimba yeVIP yekugara paImba yeBlues muWest Hollywood usiku hwaakasangana naSpector ane makore 62 ndokubva aenda naye mumumvuri wake.
Mutyairi wake, Adriano De Souza, akaudza jeri guru kuti akamirira panze mushure mokunge vaviri vacho vakapinda mumba maSpector. Anenge pakarepo mushure mekunge vaviri vacho vakapinda mumba, Spector akadzokera kumotokari ndokutakura bhegi. Anenge awa imwe gare gare De Souza akanzwa pfuti, ndokubva aona Spector achibuda kunze kwemukova ane bhuti muruoko rwake. Maererano naDe Souza, Spector akati kwaari, "Ndinofunga kuti ndakauraya mumwe munhu."
Spector Inotorwa Nekuuraya
Mushure mekunge mapurisa asvika panzvimbo yacho, hondo yakaoma yakaitwa apo Spector akakumbira kuratidzira maoko ake, ayo akanga akaputika mukati mehomwe dzake. Akarwira mapurisa uye akazopedzisira akundwa mushure mekunge mapurisa akashandisa Taser kumira pfuti kwaari ndokubva amubata pasi.
"Ndakanga Ndisingatauri Kuti Ndimupfuure"
Mukati memusha, mapurisa akawana mapfumbamwe emamwe mabhuni uye neropa rega mukati meimba.
Zvinyorwa zvehukuru huchapupu huri munyaya inoratidza kuti Spector akatanga kutaurira mapurisa kuti akauraya mutori wenhau Lana Clarkson, akazoti akazviuraya. Apo mapurisa Beatrice Rodriquez akasvika panzvimbo yacho, Spector akamuudza kuti, "Handina kureva kumupfura.
Yakanga iri njodzi. "
Mushure mekutsvakurudza kwakapera kwemwedzi mitanhatu, Spector akatongerwa mhosva munaNovember 2003 nekuda kwekuuraya kwaLana Clarkson.
Nyanzvi dzemagweta dzakaedza kushaya kubudirira kuti zvinyorwa zvinokuvadza zvidzivirire, asi musi waOctober 28, 2005, mutongi akatonga zvataurwa zvinogona kushandiswa kupikisa Spector mukutongwa.
Mumwe mupurisa akasiya basa uyo ainge ashanda dzimwe nguva kuna Joan Rivers semurindi, akapupura munguva yekuidzwa kwekuti akadzinga Spector kubva kumapato maviri eKrisimasi kuti aise pfuti uye achiita zvechisimba uye kutyisidzira pamusoro pevakadzi.
Mumwe Gweta, Two Attorneys, Three Attorneys
Mutambi akabhadhara uye akadzinga vatongi vatatu. Gweta rezvekudzivirira Robert Shapiro akamirira Spector pakutsvaga kwake uye kutongwa kwepakutanga, uye akaronga kuti asunungurwe pa $ 1 mamiriyoni ebheyili. Akatsiviwa naLeslie Abramson naMarcia Morrissey. Bruce Cutler, uyo aimbova gweta kwenguva refu yeNew York City mafia boss John Gotti, uyewo, akatsiva.
Nhoroondo yeFirp Spector
State of California - County of Los Angeles - Affidavit uye Tsvaga Warrant - The Smoking Gun.
Kushanda naP Phil Spector - CNN.com
VaNazi Low Riders - NLR
Mutungamiri weMutangisi wekuenda Ngarava Chikepe
Cailleach, Mutongi weZima
Maitiro ePurodhiyo Yakarongeka
University of Toledo GPA, SAT uye ACT Data
Kunzwisisa Position mu Poker - Poker Position Tsanangudzo
Imba Yako Inokurwara Here?
Brief Summary of Sanctuary Cities
Oscar Kukunda Vanoridzi veMaspanica - Kubva Jose Ferrer kuenda kuBenicio Del Toro
Mhando dze Song Song
Zvechokwadi Kutora Kubvisa Mapepa
Metals Nonmetals uye Metalloids - Periodic Table
Dhiyabhorosi yeChiratidzo Chekuedza Kudzidzisa
I 8 Zvikamu zvekugadzirwa muArt
1909 Kushungurudzwa uye 1910 Vaveki Vachigadzira
Nhengo dzeCongress Dzakatarisana Nenzira Yenyika Yenyika yeIsrael ye2002
Kusiyana pakati peC Celsius neCentigrade
Achishandisa Magical Poppets uye Dolls
Ndinobatanidza Sei Maroon?
Hondo Yenyika II Pacific: Kufamba Kune Hondo